Hay | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ụdị asparagus kachasị ọnụ
Ngwurugwu Asparagus dị iche iche: osisi herbaceous, osisi na osisi dwarf, lianas. Asparagus n'asụsụ Grik pụtara "eto eto". Ogologo oge gara aga, mmadụ amụtala iji osisi a maka abamuru nke onwe ya. Echọtara onyinyo mbụ nke asparagus (puku atọ BC) na Egypt, na onye Rom oge ochie bụ onye na-ede akwụkwọ nri Apitsius na nsụgharị ya na-eto ụdị àgwà nke asparagus (aha asparagus aha - nke "asparagus" sitere na Ịtali).
Ngwurugwu ugbo Alfalfa
Alfalfa bụ ọgwụ ogwu sitere na ezinụlọ legume. Alfalfa amalitela ịzụ anụmanụ maka ọgwụ na ọgwụ gastronomic. Esi kụrụ alfalfa Alfalfa kụrụ na mmalite oge opupu ihe ubi, mgbe ụwa dị ọcha, nke mere ka osisi ghara ịnwụ. Oge a kapịrị ọnụ maka ịgha mkpụrụ alfalfa na-adabere na ihu igwe nke mpaghara, na-abụkarị ọnwa nke April.
Kedu ihe dị mkpa maka mulching nke ala, karịsịa ngwa nke agrotechnical reception
Na usoro nke na-eto n'ubi na ubi kụrụ ya dị oke mkpa iji kpuchido osisi ndị ahụ na-agaghị ekwe omume nsogbu. Na-enyere aka na nke a, karịsịa, mulch - ihe onwunwe nke na-ekpuchi elu ala dị nso na akwụkwọ nri na melons, osisi berry, osisi osisi ma ọ bụ okooko osisi.
Ntuziaka nke tin currant na vodka, moonshine na mmanya
Ndepụta nke anụ ọhịa na anụ ụlọ nke ndị na-azụ anụ
"Ọdachi"! Ndị agha fleas na ụzọ isi kpochapụ ha n'ụlọ ahụ
Esi mee ka ụlọ ahụ dị ọcha
Nkọwa nke ọdịdị dị mma nke geraniums. Atụmatụ nke na-eto eto na ịzụlite osisi
Ezi nri na nlekọta nke fuchsia n'ime ogige
Ezigbo akwa akwa na greenhouses - "Honey Fingers": nkọwa na àgwà nke iche iche, karịsịa nlekọta
Ezigbo mmasị gbasara rabbits